फोटोग्राफी र भिडियो | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: फोटोग्राफी र भिडियो शूटिंग
के पुरुषले महिला प्रदान गर्नुपर्छ?
के पुरुषले महिलाको लागि प्रबन्ध गर्नुपर्छ? म पहिलो उत्तर को लागी मतदान गर्छु। पहिले, महिलाहरू जो रूममेटमा बस्छन् तिनीहरूलाई राखिएको महिला भनिन्थ्यो, यो शर्मको कुरा हो। आधिकारिक जीवनसाथीको स्थितिले यो विरोधाभास हटायो। र ती सबै ...
नाइजेजाडा डोरोफेवा। प्रसिद्ध, व्यक्तिगत जीवन, इन्स्टाग्राम, फोटो के हो?
Nadezhda Dorofeeva। व्यक्तिगत जीवन, इन्स्टाग्राम, फोटोहरू केको लागि प्रसिद्ध छ? Nadezhda Dorofeeva सिम्फेरोपोल को शहर मा अप्रिल 21, 1980 मा जन्म भएको थियो। प्रसिद्ध युगल "समय र गिलास" को सहभागी। डोरोफिवाले पनि भूमिकामा आफूलाई प्रयास गर्छिन् ...
चलचित्र "सुसाइड स्क्वाड" के हुन्छ? उहाँ र उसको मूल्या opinion्कनबारे तपाईको राय के हो?
फिल्म र "सुसाइड स्क्वाड र" के हो? उहाँप्रति तपाईको धारणा र मूल्याङ्कन के छ ? मैले एक हप्ता अघि हेरेको थिएँ। फिल्मले मलाई ब्याटम्यानको स्क्रिप्टको याद दिलायो। जहाँ जोकरले शहरलाई आतंकित गर्ने प्रयास गर्छ, र ...
एक स्विट्जटाइम मा Ekaterina बरनाबास। तस्विर कहाँ हेर्नु हुन्छ?
क्याथरीन बर्नाबास स्विमसूटमा। म फोटोहरू कहाँ हेर्न सक्छु? अभिनेत्री र "क्यामेडी महिला" को तारा Ekaterina Varnava 30 वर्ष पुरानो छ र धेरै राम्रो देखिन्छ। यस गर्मीको अगस्टमा, अभिनेत्रीले उनको पोस्ट ...
वर्षामा फोटोको लागि पोषणहरू?
वर्षामा फोटो शुटको लागि पोज गर्नुहुन्छ? वर्षामा तस्विर लिनको लागि तपाईंले आफ्नो कम्फर्ट क्षेत्रबाट बाहिर जानु पर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ, मौसमलाई वास्तै नगरिकन, केवल सकारात्मक भावनाहरू व्यक्त गर्न। र फोटोग्राफर आफ्नो ...
अल्बिनोसहरू रातो आँखा किन छन्?
किन एल्बिनोसको आँखा रातो हुन्छ? एक अल्बिनोको आँखामा, अर्थात् आईरिसमा, त्यहाँ मेलानिन वर्णक हुँदैन। र जीवविज्ञान बाट, हामी जान्दछौं अधिक मेलानिन, आँखाको रंग गाढा। इन्द्रेणी ...
सन्झ्यालद्वारा फोटो शूटको लागि पोष्ट हुन्छ?
विन्डो द्वारा फोटो शूट को लागी पोज? घरमा, आरामदायी वातावरणमा, तपाईं केवल अद्भुत फोटोहरू लिन सक्नुहुनेछ र यो तपाईंलाई आवश्यक छैन तर तपाईंसँग ठाडो भित्री, महँगो फर्निचर र अन्य सामानहरू हुन्छन्। भाग्यशाली ...
2016 दुल्हन चलचित्र कहाँ गयो?
दुलही २०१ 2016 को फिल्म कहाँ भयो? Gelendzhik मा चित्रित, गाउँ Dzhanhot भनिन्छ। २०१ 2016 को प्रीमियर फिल्म 'द ग्रम अफ २०१ XNUMX' झ्झनहोटको गाउँको क्रस्नोदर इलाकामा फिल्माइएको थियो। सबै मुख्य स्थानहरू त्यहाँबाट लिइएको थियो। काम गरेको ...
के म मारेको मृतकलाई फोटो खिच्न सक्छु? फोटोग्राफ क्यानल?
के मरेकाहरूको अन्त्येष्टिमा फोटो खिच्न सम्भव छ? अन्त्येष्टि को चित्रहरु लिदै? धेरै जनाले अन्त्येष्टिको फोटो लिन्छन्। यो गर्न निषेध गरिएको छैन। तर यो गर्न सकिन्छ कि हुँदैन भनेर निर्णय गर्नु व्यक्तिगत कुरा हो। केहि बारे मा नकारात्मक छन् ...
तपाईले सेतो वस्तुहरूको तस्वीरहरू कस्ता पृष्ठभूमिमा छ?
सेतो वस्तु फोटोग्राफ गर्न के पृष्ठभूमि? यो रंगीन पृष्ठभूमिमा सेतो वस्तुहरूको फोटो बनाउन उत्तम हुन्छ, प्राथमिकतामा ठोस र .्ग। पृष्ठभूमि धेरै उज्ज्वल र संतृप्त हुनु हुँदैन, अन्यथा दर्शकहरूको ध्यान पृष्ठभूमि द्वारा आकर्षित गरिनेछ, ...
म खाने कागज किन रोक्न सक्दैन?
म किन कागज खान रोक्न सक्दिन? सिद्धान्तमा, तपाईं मात्र हुनुहुन्न, र महिलाहरू विशेष गरी कागज खानको लागी यस्तो दुर्व्यसनीबाट ग्रस्त छन्। र यो सम्बन्ध हुन सक्छ, जसमा हुने शारीरिक प्रक्रियाहरूसँग ...
बेल्फी (नयाँ स्टार प्रवृत्ति) - यो के हो?
बेल्फी (नयाँ स्टार प्रवृत्ति) - यो के हो? बेल्फी, उनीहरूले एउटा फोटो लिन्छन् जसलाई एक व्यक्ति, र प्रायः केटी आफैंमा लैजान्छ, अर्थात् तिनीहरू आफैंले फोटो खिच्दछन्। वा बरु यसको आफ्नै पछाडि दृश्य, तर ...
तिमीलाई कसरी थाहा छ कि तपाईं बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नु भयो?
कसरी बिजुली चल्‍यो तपाइँबाट कति दूरीमा पत्ता लगाउने? यो गणना गर्न सजिलो छ: प्रकाशको गति आवाजको गति भन्दा धेरै उच्च छ। र तसर्थ, बिजुलीको फ्ल्यास देख्यौं, हामी तुरून्त गणना गर्न थाल्छौं, र नोट गर्नुहोस् कि कति पछि हामीले सुने ...
के एसएलआर क्यामेरामा शूटिंगको लागि मोनपोड प्रयोग गर्न सजिलो छ?
एक मोनोपड DSLR क्यामेराको साथ शूटिंग को लागी सुविधाजनक छ? एसएलआर क्यामेराको मुख्य फाइदा भनेको विभिन्न प्रकारका सुटि forहरूको लागि विनिमेय लेन्सहरूको उपलब्धता हो। यदि विषय शूटिंग बिन्दुबाट टाढा छ भने ...
म्यागोट के हो?
मुगशट के हो? मुगशट एक प्रहरी स्टेशन मा लिईएको एक अपराधी अपराधीको फोटो हो। मुगसट सामान्यतया दुई फोटोहरू समावेश गर्दछ: पूर्ण अनुहार, त्यो हो, अगाडि, र प्रोफाइल, जुन छ। त्यसो ...
Photoshop मा पाठ मेटाउने वा हटाउने?
फोटोशपमा पाठ कसरी हटाउने वा हटाउने? यदि फन्ट सानो छ भने, त्यसपछि राम्रो अनुभवको साथ "स्ट्याम्प" वा "हिलिंग ब्रश" प्रयोग गरेर सभ्य रूपमा बाहिर निस्कन्छ। यदि फन्ट धेरै ठूलो छ भने, यसले काम नगर्न सक्छ, किनभने ...
पेलिल्ल Volya संयुक्त राज्य अमेरिका मा आफ्नो भ्रमण को समयमा रूस को अपमान कसरि गरे? भिडियो कहां छ?
अमेरिकाको भ्रमण गर्दा पाभल भोल्याले कसरी रूसीहरूको अपमान गरे? तपाई कहाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ? म बुझ्दिन कि पाभल भोल्याले रसियनहरूलाई कसरी अपमान गरे। वा बरु धेरै यस बारेमा कुरा गर्छन्, तर मँ बुझ्दिन। हुनसक्छ…
मध्यस्थ फोटोहरूको लागि ओड्नोक्लास्नीकीमा ओकी पाउन सम्भव छ?
के यो & "Odnoklassniki &" मा फोटोहरू मध्यस्थताका लागि Oki प्राप्त गर्न सम्भव छ? होइन, दुर्भाग्यवश! अंकहरू मध्यस्थताको लागि प्रदान गरिन्छ, तर अफसोस, OKI होइन। तपाईंले कमाएको अंकहरू साट्न सक्नुहुन्छ ...
डारिया मेलनिकोवा: अभिनेत्री को उचाई र वजन कस्तो छ? दशा को फोटोहरू कहाँ देख्नुहुन्छ?
डारिया मेल्निकोवा: अभिनेत्रीको उचाई र तौल के हो? म दशाको फोटो कहाँ पाउन सक्छु? अभिनेत्री डारिया मेल्निकोवा, जसको नाम धेरै फिल्महरूबाट हामीलाई परिचित छ, १ 163 सेन्टीमिटर लम्बाई रहेको छ। उनका वजन 49 kg केजी छ। चाखलाग्दो कुरा यो हो ...
Nikon 5200 क्यामेराबाट हटाइएको भिडियो पुनःप्राप्त गर्ने?
Nikon 5200२०० क्यामेराबाट मेटाइएको भिडियो कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने? +१ जेलरन यो सहि छ। मेमोरी कार्डबाट भिडियो पुनः प्राप्त गर्दै। केही फरक पर्दैन कि भिडियो क्यामेराबाट रेकर्ड गरिएको छ। EasyRecchool, Recuva, वा ... को प्रयास गर्नुहोस्
53 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,056 प्रश्नहरू।